Imibuzo Ebuzwa Rhoqo-Funda ukurhweba
Q1. Yintoni uLwazi 2 loRhwebo?
Funda 2 Urhwebo liziko lemfundo labarhwebi eligxile ekuboneleleni ngohlalutyo oluphezulu lweemarike ze-forex, izikhokelo ezineenkcukacha kunye nohlaziyo lwentengiso ebukhoma.
Sigxile kwizinto zorhwebo, ii-indices, ii-cryptocurrensets, kwaye ewe, urhwebo lwe-forex. Funda i-2 yoRhwebo ikwabonelela ngexesha langempela imiqondiso zokuthengisa kwezi klasi zeeasethi.
Ngaphandle kweempawu zethu zokurhweba ezinokuthenjwa, siyaziqhayisa ngesiseko solwazi olunzulu kubarhwebi bazo zonke iintlobo, ezibandakanya icandelo leendlela eziphambili ze-forex, eyona khosi yokurhweba ye-forex onokuyifumana phaya, kunye neZiko lethu lokuFunda elithandwa kakhulu.
Umbuzo Zeziphi izixhobo zemfundo ezifundwayo nguRhwebo 2 ukunceda ukuphucula urhwebo lwam?
Funda 2 Iqela labarhwebi abaqeqeshiweyo kunye nabahlalutyi badibanisa ubuchwephesha babo bokukuzisa ezi zibonelelo zilandelayo:
Ukuhlaziywa kweemarike ngoku ezibandakanya iiseshoni zokurhweba kwihlabathi liphela.
Isimahla ye-forex yasimahla kunye neyeprimiyamu, imveliso, isalathiso sesitokhwe, kunye neempawu zokuthengisa zedijithali.
Zininzi izicwangciso zokurhweba.
Iziko elinamandla 'lokufunda' elinamagama ahlukeneyo okurhweba kunye nolwazi olugubungela izixhobo ezahlukeneyo zemali, amaqonga orhwebo, ukhetho lotyalo-mali, abathengisi be-forex, iingcebiso zokurhweba kwangaphambili, njl.
Inkqubo yokufunda yorhwebo ye-2 yokufunda.
Umbuzo. Ngaba ndinga sebenzisa imiqondiso yorhwebo yokuFunda 3 kunye neendlela zokurhweba ngeForex simahla?
Ewe. Unga. Ukusebenzisa imiqondiso yethu yasimahla yokuthengisa ngokulula ndwendwela iphepha lethu leempawu zangaphambili apho uza kufumana iinkcukacha zempawu zexesha elifutshane kunye nexesha elide kurhwebo kwisinali yesiginali. Sinefayile ye- Inkonzo yeempawu zeprimiyamu ye forex ebonelela ngezibonelelo ezongezelelweyo ezibandakanya i-imeyile kunye nezilumkiso eziphathwayo zempawu zorhwebo.
Funda ngeendlela ezi-2 zorhwebo zokurhweba ezinokusetyenziswa simahla. Ndwendwela ikhonkco elingasentla ukufumana iindlela ngeendlela zokurhweba kubandakanya ezisisiseko, ezobuchwephesha, kunye neendlela zokurhweba ezaziwa ngaphambili.
Umbuzo Ngaba ndiyayidinga imvelaphi ethile yemfundo okanye amava okurhweba ngaphambili ukuze ndisebenzise ukufunda ngemfundo yorhwebo 4 kwaye ndiphumelele njengomrhwebi we-Forex?
Awudingi naziphi na iziqinisekiso ezithandekayo okanye amava orhwebo lwe-forex ukonwabela ubutyebi bemfundo yokuthengisa kwangaphambili kunye neenkonzo kwiwebhusayithi yokuFunda 2 yoRhwebo. Ngokukhawuleza uqala, ngokukhawuleza unokuba ngumrhwebi we-forex onempumelelo kwaye onenzuzo.
Nokuba awazi kwanto ngorhwebo lwe-forex, ungabandakanyeka ngokukhawuleza kule marike imangalisayo. Umzekelo, abathengisi abangenamava banokulandela ngokulula imiqondiso yethu yokurhweba nge-forex ngaphandle kokukhathazeka ngohlalutyo lobuchwephesha okanye ixesha lokuthengisa. Le yeyona ndlela ilungileyo yokusebenzisa ubuchule babarhwebi abanamava kunye nabahlalutyi ngelixa ufunda iinkcukacha zokurhweba kwangaphambili ngokwakho.
Umbuzo 5. Ndingathanda ukuqala ukuthengisa i-forex kwaye ndisebenzise imiqondiso yokuthengisa. Ndiqala ngaphi?
Ungaqala ukurhweba ngaphandle kwexesha ngokuthatha la manyathelo alula:
Vula iakhawunti ye-forex yorhwebo ngomnye wethu Abarhwebi be-forex abacetyiswayo.
Faka imali yakho yokuqala kule akhawunti yorhwebo.
Tyelela yethu imiqondiso Forex iphepha kwaye ukope imiqondiso yorhwebo kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Q6. Ndingathanda ukuba yingcali yomrhwebi. Isikhokelo soRhwebo sokuFunda 2 soRhwebo lwaBenzi beMali 'singandinceda njani ukuba ndibengumrhwebi weFX?
Oku kunamandla phambili yezohwebo enikezelwa yi-Learn 2 Trade iqulathe ngaphezulu kwezahluko ezilishumi zolwazi olusebenzayo lokurhweba, eligubungela uluhlu lwezihloko.
Kwesi sikhokelo, uya kufunda isigama nesiseko sokurhweba kwangaphambili, indlela yokusebenzisa ucazululo lobuchwephesha kunye nesiseko, ukusebenzisa zonke iintlobo zezalathi, indlela yokuqonda phakathi kwezakhiwo ezahlukeneyo zentengiso, indlela yokufaka ithiyori ye-Elliot Wave, nokunye okuninzi! Uyakufumana yonke into oyifunayo ukuze ube ngumrhwebi oqeqeshiweyo we-forex kwisikhokelo sethu sokurhweba nge-forex.
Umbuzo 7. Ndifuna ukuqala ngokurhweba nge-forex kunye nezinye izixhobo ezinje ngeempahla, ii-indices, kunye nee-cryptocurrensets. Ndinomdla wentengiso / ikopi yokurhweba. Ngaba ungandinceda ndifumane umthengisi onokuthenjwa?
Ngokuqinisekileyo. Ukukhokela abarhwebi abanokubakho ekufumaneni oyena broker uphambili we-forex olungele iimfuno zabo yenye yezinto ezimbini eziphambili zokuFunda kwezorhwebo. Siyazi ukuba kubalulekile ukudibana nomrhwebi othembekileyo onika intengiso ethembekileyo yokudityaniswa kunye neqonga lokurhweba ekulula ukulisebenzisa kunye nezixhobo ezifanelekileyo zokurhweba.
Ukufumana umthengisi olungileyo kwiimfuno zakho ezithile zokurhweba, jonga kwiphepha lethu labarhwebi elicetyiswayo apho uya kufumana khona Abarhwebi ababalaseleyo be forex ababonelela ngosasazeko lokhuphiswano kwizinto zorhwebo, iimali, ii-indices, kunye nee-cryptocurrensets. Abanye baba bathengisi, umzekelo eToro, Kwakhona ukuququzelela urhwebo lwentlalo.
Q8. Sele ndinayo iakhawunti yokurhweba kwangaphambili. Ndingazisebenzisa njani ngokufanelekileyo izixhobo kunye neenkonzo ezifumanekayo kuFundo 2 loRhwebo?
Funda ii-2 zoRhwebo imiqondiso yokuthengisa yeprimiyamu ziindlela ezilungileyo zokuqalisa ukusebenzisa konke esikunikayo. Iimpawu zethu zepremiyamu zibonelela ngoncedo olukhulu lokuziswa kuwe nge-imeyile kunye nezilumkiso eziphathwayo. Ngokukopa imiqondiso yorhwebo eFundwayo yesi-2 kwiakhawunti yakho yorhwebo, unokufumana inzuzo ngokurhweba ngezixhobo ezahlukeneyo zezemali, nokuba ungumqali okanye umrhwebi onamava. Vumela abarhwebi bethu bobuchwephesha kunye nabahlalutyi bakucocele ngaphandle urhwebo olunenzuzo kuwe!
Ewe sinayo yonke imihla forex news kunye nokuhlaziywa kweemarike ngokuqhubekayo liqela lethu labahlalutyi ababalaseleyo. Ungakulibali zonke izinto ezifundisayo esinazo kwiwebhusayithi yethu ukuze ube ngumrhwebi ongcono.
Umbuzo 9. Andiqinisekanga ukuba leliphi iqonga lokurhweba le-forex endifanele ukulisebenzisa. Ngaba unalo ulwazi olulungileyo lokundinceda ndikhethe iqonga elifanelekileyo lokuthengisa?
Ewe sakwenza njalo! Zonke zethu Abarhwebi abacetyiswayo unikeze amaqonga ezorhwebo aphezulu. Ukuzama la maqonga ngaphandle kokuzibophelela okanye ukuzibophelela, vula iiakhawunti zedemo kunye nabantu obathandayo. Nokuba ufuna iqonga le-MT4 eliqhelekileyo okanye iqonga lokurhweba eluntwini, sinalo lonke ulwazi oludingayo.
Ngolwazi oluneenkcukacha ngamaqonga orhwebo athembekileyo e-forex, jonga eyethu Iiplatifti zorhwebo eziPhambili ze Forex iphepha ngoku!
Umbuzo10. Zithini iimpawu zokuthengisa zorhwebo 2?
Funda 2 Urhwebo ineqela labarhwebi abanezakhono kakhulu abahlalutyi beemarike abaziingcali. Aba barhwebi baqhubeka nokuskena i-forex, imveliso yorhwebo, kunye nezinye iimarike ukuze bafumane elona thuba lihle lokurhweba kuwe!
Xa abahlalutyi bethu bebona amathuba amahle orhwebo, bathumela izimvo zorhwebo ngohlobo lweempawu zokurhweba zexesha elide kunye nelifutshane (izilumkiso zorhwebo) Isiphelo sendlela yokubonisa. Ezi zimpawu zorhwebo zithunyelwe ngeenkcukacha ezinje ngokuthatha inzuzo kunye stop-ilahleko Iiparameter kwaye zinokukhutshelwa kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Umbuzo Ndisisebenzisa njani isiXhobo sokuFunda sokurhweba?
Sebenzisa imiqondiso yorhwebo yokuFunda 2 kulula kakhulu. Landela nje imiqondiso yokurhweba njengoko ivela kwisiphelo sendlela yethu Iphepha lemiqondiso ye forex kwaye ukope iiparameter zempawu zorhwebo (yeka ukulahleka kwaye uthathe iiodolo zenzuzo) kwiakhawunti yakho yorhwebo. Nalu ulwazi oluthe kratya kwi indlela yokusebenzisa imiqondiso yethu yorhwebo enenzuzo.
Kwakhona, unokuba unqwenela ukuthenga iUkuba ungathanda ukwaziswa ngalo lonke ixesha umqondiso omtsha wezorhwebo uvela kwisinali yethu yesiginali, thumela umrhumo wethu Iimpawu zangaphambili ze-forex inkonzo ngoku!
Umbuzo Zijongwa njani iZifundo zorhwebo ngeempawu zokurhweba?
Iqela labahlalutyi abanamava kunye nabarhwebi abaqeqeshiweyo kwi-Learn 2 Trade landela iimarike zezemali ubusuku nemini, iintsuku ezintlanu ngeveki, zikhangela amathuba orhwebo angavezwanga ukuthatha ithuba. Ngokusebenzisa zombini uhlalutyo lobuchwephesha kunye nolusisiseko, abahlalutyi bethu baya kubude obukhulu ukubonelela abasebenzisi bethu ngeempawu zorhwebo ezinokwenzeka.
Umbuzo13. Ndingenza ntoni ukugcwalisa amava am wokusebenzisa imiqondiso yakho yorhwebo? (Ngaba ikhona into ekufuneka ndiyifundile ukundinceda ndisebenzise imiqondiso yakho ngokufanelekileyo?)
Kuyacetyiswa kakhulu ukuba ubuncinci ufunde iziseko zokurhweba kwangaphambili. Xa usebenzisa imiqondiso yorhwebo yokuFunda 2, kukho amanyathelo athile olawulo lomngcipheko ekufuneka uwasebenzisile ukugcina imali yakho yotyalo-mali. Umzekelo olungileyo walowo manyathelo uya kuba kukunciphisa umda wobungakanani obusebenzisayo kunye neempawu zethu zorhwebo.
Ngapha koko, ukuqonda okusisiseko kwesigama sokurhweba kwangaphambili, ukwenziwa korhwebo kunye nolawulo, kunye nohlalutyo lobuchwephesha kunye nolusisiseko luyacetyiswa. Ngaba uyayazi le migaqo ilandelayo yorhwebo: umbhobho, amandla, uyeke ukulahleka, uthathe inzuzo, ngababini abakhulu bemali, ixesha elide, elifutshane, umkhwa, njl. Ukufunda ukuba zeziphi, kunye nezinye iikhonsepthi zokurhweba ezilula kunye nezobuchule, ndwendwela iZiko loFundo loRhwebo lokuFunda 2 namhlanje.
Umbuzo14. Yintoni urhwebo lwentlalo?
Urhwebo lwentlalo yenzeka kumaqonga orhwebo ale mihla akwi-intanethi aququzelela ukuthengisa kunye nokunxibelelana kwezentlalo (kugxile kulwazi lokuthengisa / lwentengiso) phakathi kwabasebenzisi abahlukeneyo bamaqonga orhwebo.
Kwiindawo zokuthengisa zentlalo, njenge eToro, izimvo zorhwebo kunye neenkcukacha kunokwabelwana ngazo ngaphandle komzamo phakathi kwamalungu. Abatyalomali kunye nabarhwebi banokukhuphela ngokuzenzekelayo ukurhweba kwabatyali mali abanamava kwiiakhawunti zabo zorhwebo ngokumisela nje inxenye yeemali zabo kurhwebo kwaba bantu.
Umbuzo Ndingabandakanyeka njani kurhwebo okanye kutyalo-mali kwi-forex, kwisalathiso sesitokhwe, nakwiimarike zorhwebo? (Zeziphi iindlela ezahlukeneyo zokwenza imali ngezi klasi zeeasethi?)
Ezi zezona ndlela zibalaseleyo zokujongana ne-forex, izinto zorhwebo, kunye nee-indices zesitokhwe:
Urhwebo ngokuphila imiqondiso yokuthengisa / izilumkiso zorhwebo.
Funda ukuzithengisa ngokwakho ezi zixhobo.
Intengiso / ikopi yorhwebo - ikopi labarhwebi abanamava ngokuthe ngqo kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Umbuzo 16. Zeziphi iintlobo zeziphumo zokufunda urhwebo olufezekisiweyo ngeempawu zabo zorhwebo lwe-forex?
Iqela lethu labarhwebi abaqeqeshiweyo kunye nabahlalutyi bebetsala amawaka eepip ngaphandle kweemarike ukusukela oko baqala ukuhambisa iinkonzo zomqondiso worhwebo. Umzekelo, kwi-2016 sineebhegi ezingama-4907 kwaye saba nenzuzo ye-11 kwezi-12 iinyanga. Jonga ukuFunda 2 urhwebo Ingxelo yeempawu ze2018 apha.
Umbuzo 17. Ndingayilawula njani ngokufanelekileyo imingcipheko enxulumene norhwebo lwe-forex?
Enye yeendlela ezinamandla zokunciphisa umngcipheko onxulumene norhwebo lwe-forex kukuzixhobisa ngemfundo ye-forex yokuthengisa. Ukuba yile nto unayo engqondweni, ukule ndawo ichanekileyo. Funda iZiko lokuFunda le-2 loRhwebo ligcwele ulwazi oluxabisekileyo malunga nokuthengisa kwangaphambili kunye notyalo mali. Oku kubandakanya ikhosi yethu yokurhweba kwangaphambili, iingcebiso zokuthengisa kwangaphambili, iindlela zokurhweba kwangaphambili, Ulawulo lomngcipheko we forex, nokunye okuninzi.
Enye indlela enamandla yokuthintela uninzi lweengozi ezibangelwa kukurhweba kwangaphambili kukulandela kunye nokukopa abathengisi abanamava. Nokuba usebenzisa i-2 yokuthengisa imiqondiso yorhwebo lwe-forex okanye ukukopa abatyali mali abaziwayo (abarhwebi abakhutshelweyo) kumaqonga orhwebo, ukusebenzisa ubuchule babarhwebi abomeleleyo kunika izibonelelo ezininzi.
Umbuzo Yimalini endinokuyenza ngokurhweba nge-forex, ii-indices zesitokhwe kunye nezinto zorhwebo?
Isibhakabhaka ngumda! Ezi ntengiso zibonelela ngezixhobo ezingamanzi kakhulu ezirhweba ngexabiso elikhulu. Oku kwenza ukuba abathengisi babenakho ukwenza izikhundla ezikhulu zorhwebo ngokuncipha okanye ukungabikho. Esi sisibonelelo esihle kakhulu esivumela umrhwebi ophakathi ukuba akhe ishishini elikwi-Intanethi elinokungaze liphele kubathengisi nakubathengisi.
Ewe ukwenza imali kwi-forex, yorhwebo, nakwezinye iimarike kufuna ukuzimisela kunye nemfundo efanelekileyo yokurhweba ukuba uza kwenza konke ukurhweba ngokwakho (ikopi yokurhweba kunye nokulandela imiqondiso yorhwebo ye-Funda 2 yorhwebo inganeno kakhulu). Ukuba ujonge imfundo yorhwebo ekumgangatho ophezulu, indawo elungileyo onokuthi uqale kuyo iZiko lethu lokuFunda.
Umbuzo 19. Andikwazi ukuchitha iiyure ndibukele iitshathi ze-forex yonke imihla. Ngaba kunokwenzeka ukuba urhwebe i-forex ngexesha elilinganiselweyo elifumanekayo?
Ngokuqinisekileyo kunjalo! Uninzi lwabathengisi be-forex abaphumeleleyo benza urhwebo lokuphela kwemihla, okanye urhwebo lwexesha elide, olungadingi xesha lininzi kwaphela. Nokuba unomsebenzi we-8-5, usenakho ukufikelela kwiziphumo zokurhweba ngeFX ngale ndlela.
Ewe kunjalo, zikho ezinye iindlela zokurhweba nge-forex ukuba ixesha lakho lilinganiselwe. Enye yezi ndlela kukusebenzisa Iimpawu zangaphambili ze-forex. Enye indlela kukuzibandakanya kurhwebo lwentlalo kunye nomrhwebi wentlalontle onje eToro.
Ngorhwebo lwentlalo, urhwebo lwabathengisi abanamava lukopishwa ngokuzenzekelayo kwiakhawunti yakho yorhwebo. Oku konga ixesha elininzi kuba awudingi ukujonga iitshathi okanye wenze uhlalutyo lweemarike kukonke!
Umbuzo. Ngaba kunokwenzeka ukuqala ukurhweba nge-forex ngemali encinci okanye mhlawumbi kwiakhawunti yokusebenza?
Ewe yiyo. Ungaqala ukurhweba nge-forex encinci njenge- $ 100. Ubukho be oluxhathisayo yenza ukuba abathengisi abancinci bavule iqashiso elincinci (i-1000 yesibini semali) abathengisa i-forex engaphantsi kwe- $ 15. Oku kuxhomekeke kwinani lokuphakanyiswa ngumthengisi wakho, ewe.
Abahwebi abafuna kuqala ukuziqhelanisa nemarike ye-FX ngaphambi kokuba babeke emngciphekweni imali yabo, banokuvula iakhawunti yeedemo zasimahla kunye nenye yezindululo zethu. Abarhwebi be forex kunye nokuziqhelanisa nokuthengisa kweFX ngemali ebonakalayo.
Umbuzo Yintoni amandla kwaye ingayichaphazela njani inzuzo okanye ilahleko yam ngokurhweba kwangaphambili?
Ukubeka nje, ukusebenzisa amandla ngokurhweba kwangaphambili kuthetha ukuba indawo enkulu yokuthengisa inokulawulwa ngemali encinci. Umzekelo, nabanye Abarhwebi be forex ababonelela nge-1: 500, unokuthenga okanye uthengise iiyunithi ezili-1000 ze-USD / JPY yemali nge-'dipozithi 'ye- $ 2. Ubungakanani borhwebo ngobukhulu be-1K USD / JPY isikhundla ziidola ezili-1000.
Kuthetha ukuba nge-1: 500 yokunyusa, udinga kuphela i- $ 2 ukuya evulekileyo isikhundla esinexabiso leedola ezili-1000. I $ 998 eseleyo ibolekwe kumthengisi we forex. Ewe umrhwebi uya kudinga ngaphezulu kwe- $ 2 ukuya kugcina esi sithuba sakuba sivuliwe. Sebenzisa ubungakanani kurhwebo lwe-forex olunokubanakho ukukhulisa zombini iinzuzo kunye nelahleko. Ukusetyenziswa koxinzelelo olugqithisileyo sisizathu esiphambili sokuba abathengisi bokuqala baphulukane nemali kwintengiso yeFX.
Umbuzo Zeziphi izibonelelo zokurhweba nge-forex ngexesha lokungazinzi kwezopolitiko nezoqoqosho?
Abanye abathengisi bathanda ukufutshane (ukuthengisa) amasheya xa ukungazinzi kubunzima kwiimarike ezinkulu. Nangona oku kuvakala njengengcinga elungileyo, kuthwala umngcipheko omkhulu kunokuthenga (ukuhamba ixesha elide) esitokisini. Kungenxa yokuba ukuhlawulwa okuphezulu kwintengiso emfutshane yesitokhwe yi-100%, eyenzeka xa ixabiso layo liwela kwi-zero. Kwelinye icala, ilahleko enokubakho kwintengiso yesitokhwe emfutshane ithiyori ayinakuphela.
Ngokuchasene noku, nokuba umrhwebi uhamba ixesha elide (uyathenga) okanye ufutshane (uthengisa) isibini semali, eyona ilahleko inkulu kumacala omabini iyi-100%, ngelixa eyona nzuzo iphezulu ingenamkhawulo. Ke, nokuba uyathengisa okanye uyathengisa isibini semali, awujongani nomngcipheko wokufumana umvuzo 'ukungalingani' okunxulunyaniswa nokushokoxeka kwezitokhwe. Oku kwenza urhwebo lwe-forex lubhetyebhetye ngakumbi kwaye lube nomngcipheko omncinci kunesitokhwe sokurhweba ngamaxesha apho iimarike zentengiso zisemngciphekweni. Olunye uncedo lokuthengisa kwimarike ye-forex enkulu utywala inikezela, ngakumbi ngababini abakhulu bemali.
Umbuzo 23. Zimbi kangakanani iimeko zedijithali?
Iimali zedijithali, okanye ii-cryptocurrensets, zibhetyebhetye kakhulu. Nangona i-forex iguquguqukayo, ii-cryptocurrensets zikhulu ngakumbi. Iimali ezinkulu ezinqabileyo azihambi ngaphezulu kwepesenti ezi-5 ngosuku olunye. I-cryptocurrensets, nangona kunjalo, ihlala ihambisa ngaphezulu kweepesenti ze-10 ngosuku olunye. Eyethu Uludwe lwemali engancinci yemali yedijithali namhlanje Kutshanje kufunyenwe ngaphezulu kwama-70% ngosuku olunye.
Umbuzo 24. Sisiphi isibonelelo endifanele ukusisebenzisa ukuthengisa ii-cryptocurrensets?
Cryptocurrencies, ikwabizwa ngokuba yimali yedijithali, ayizinzanga kakhulu, ke ngoko kufanele ukuba kulungelelaniswe ngokufanelekileyo. Ukuba usebenzisa i-x10 yokuphakama kwintengiso yakho ye-forex, emva koko ukurhweba nge-cryptocurrency kufuneka unciphise amandla ngamaxesha angama-8-10 njengoko imarike ye-crypto iphindaphindwe kalishumi ngokungazinzi. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka urhwebe ngaphandle kokuphakamisa konke konke.
Ukuba ukungazinzi kuyaqhubeka, kuya kufuneka usike amandla akho ngakumbi-ube nezikhundla ezimbalwa ezivulekileyo. Sukuba nexhala lokwenza inzuzo elungileyo, zininzi iipip zenziwe kule marike.
Umbuzo 25. Zithini iiyure zokurhweba kwimakethi ye-cryptocurrency?
Imakethi ye-crypto yimarike ye-24/7. Intengiso ye forexKwelinye icala, yimakethi engama-24/5, evulwe kusasa ngoMvulo e-Asia ukuya ngoLwesihlanu ngokuhlwa e-US
Umbuzo. Ngawaphi amathuba emihla ngemihla awanikwa ngabahlalutyi boRhwebo 26?
Funda i-2 yoRhwebo ibonelela ngamathuba orhwebo mihla le kwi-forex, iimveliso, ii-indices kunye nee-cryptocurrensets. Indawo yethu yobungcali ibandakanya; Iimpawu zangempela zexesha le-forex, uhlaziyo lwentengiso ebukhoma 24/7, izimvo zorhwebo, kunye nohlalutyo lwemarike.
Umbuzo 27. Ngaba inkqubo yakho yomqondiso izenzekelayo okanye ngaba uvelisa imiqondiso ngesandla?
Funda imiqondiso emibini yorhwebo ebonelelwa bukhoma ziingcali zethu ze forex. Ikhokelwa nguSkerdian Meta, iqela lethu leengcali ngabahlalutyi abanamava kunye nabarhwebi abaskena iimarike kwaye babonelele ngohlalutyo lwentengiso oluhlaziyiweyo, izimvo zorhwebo, kunye neempawu zorhwebo. Abahlalutyi bethu bagubungela imarike ye-forex kunye nee-cryptocurrensets, ii-indices kunye nezinto zorhwebo.
Umbuzo 28. Ngaba uyarhweba nge-Aussie (i-Dola yase-Australia) kunye ne-Kiwi (New Zealand Dollar)?
Sithengisa zonke iimali zorhwebo, ngakumbi ngokuchasene nedola yaseMelika. Emva kwayo yonke loo nto, i-AUD / USD kunye ne-NZD / i-USD zii-forex eziphambili. Sithanda ukuzithengisa kwaye sivule imisebenzi emininzi kubo njengoko ngamanye amaxesha kulula ukuqikelela.
Umbuzo 29. Sisiphi isibonakaliso esingcono, i-Relative Strength Index (RSI) okanye i-stochastics?
Akukho nto inje ngesalathiso esingcono. Kukho izikhombisi ezininzi zobuchwephesha, ubuncinci i-10 yazo zilungile ukuba zisetyenziselwe uhlalutyo lobuchwephesha kubandakanya i-RSI kunye ne-stochastics. Sisebenza nesikhombisi se-RSI, njengoko siqhelene nayo kodwa oku akufuneki kususe istochastic.
Umbuzo 30. Ungarhweba njani nge-EUR / USD? Zeziphi iindlela onokuzisebenzisa? Ungayithenga okanye uyithengise?
Sisebenzisa bobabini ubuchule kunye neendlela ezisisiseko xa sithengisa ngababini be-forex. I-EUR / USD sesona sibini siphambili kwaye siphendula kakuhle kwiziganeko ezisisiseko kunye nezobuchwephesha. Ke, sidibanisa inani lezalathi kunye nezikhombisi ezisisiseko kwi-arsenal yeendlela zokubonelela ngeyona miqondiso ilungileyo ye-forex yesi sibini.
Umbuzo 31. Ucinga ukuba i-US dollar izokuya kweliphi icala kwiiveki ezizayo?
Akukho nto iqinisekileyo nge-100% kwi-forex, yiyo loo nto ishishini elinzima. Kodwa inzuzo yenzelwe ukuba uyazi ukuba uhlalutye njani kwiimarike.
Xa ujonga ixesha elide, njengeetshathi zemihla ngemihla kunye nezeveki, i-Dola yaseMelika iqhubeka isezantsi ngokuchasene noogxa bayo. Ngenxa yoko, i-US Dollar Index ikwi-downtrend esekwe.
Logama nje esi salathisi sihlala ngaphantsi komndilili othile wokuhamba (umz. I-avareji yeentsuku ezingama-200 ezihambayo), akukho sizathu sokulwa nokudodobala okukhoyo. Inqanaba lenkxaso elibalulekileyo liye laphulwa kwi-US Index Index ngasekupheleni kuka-2017 kwaye eli nqanaba linye linokuxhathisa kungekudala.
Olona lwalathiso lwentengiso lunokubakho lwedola lisezantsi kwaye ngenxa yoko sihlala sihamba kancinci ukuya kwi2018.
Umbuzo 32. Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokurhweba ngeBitcoin?
Njengakwii-cryptocurrensets ezininzi, i-Bitcoin ibikwindlela ye-bullish yexesha elide ukusukela oko yaqalwa. Umkhwa uye usomelela, ke indlela yokurhweba ngeBitcoin kukuhamba ixesha elide (ukuthenga) kunye nomgangatho omncinci. Kuhlala kucetyiswa ukuba ulinde ukubuyela umva ngesidima kwaye emva koko uvule indawo. Kunye I-Bitcoin, indlela yokuthenga kunye nokubamba inokuba inomdla.
Umbuzo33. Yintoni i-blockchain? Isebenza njani kwaye kutheni ibaluleke kangaka kwi-cryptocurrensets?
Ibhloko ye-blockchain sisikhokelo esidlangalaleni esisasazwa kwilejithali esigcina iakhawunti yentengiselwano ngendlela esasazekileyo. Ileja ihlaziywa ngexesha lokwenyani, kwaye onke amaqela anekopi yale ncwadana. Intengiselwano yemali yedijithali ziqokelelwe kwiibhloko kwaye zongezwa kwi-blockchain ngokulandelana. Ungeniso kwileja ye-blockchain alunakutshintshwa ngokubuyela umva kuba kuya kufuneka ukuba zonke iibhloko ezilandelayo zitshintshwe kwaye ziya kufuna intsebenziswano yamaqela ahlukeneyo kuthungelwano.
Ngale miba engqondweni, Iteknoloji ye-blockchain Isisombululo esigqwesileyo sokuququzelela ukwabiwa kwabantu abasemagunyeni, ubuhlobo kunye noontanga beemali ezininzi, kubandakanya i-bitcoin.
Umbuzo 34. Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuthengisa i-cryptocurrensets? Zeziphi iindlela onokuthi ucebise ngazo?
Ngenxa yovuselelo olunamandla apho uninzi lwee-imali ezixabisekileyo ezifumanekayo zikhona, a indlela yokuthenga nokubamba usebenze ngaphezulu kwezinye iindlela zorhwebo.
Xa ufaka isicelo solawulo lwemali egcinakalayo, 'ukuthenga-nokubamba' isicwangciso sokurhweba nge-cryptocurrency / isicwangciso sokutyala lukhetho olukhulu ngenxa yokulula kunye nokusebenza ngokugqwesileyo. Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba urhwebo lwe-crypto olungenasiseko lolona khetho lwakho lukhuselekileyo.
Umbuzo 35. Ngaba ii-cryptocurrensets zingathengiswa ngekopi? Kwaye uyazi nge-cryptocurrency broker elungileyo kwezentlalo?
Ngokuqinisekileyo! Njengazo zonke iiasethi ezithengiswayo ii-cryptocurrensets zingathengiswa. Jonga ezethu Uphengululo lwe-eToro yedijithali.. I-eToro yeyona broker inkulu kwezentlalo kwaye kungokunje ibonelela ngeemali ezi-7 ezahlukeneyo kwaye ikuvumela ukuba ukope intengiso yabatyali mali abaninzi (kunye nezinye) simahla.
Q36. Ngaba kunokwenzeka ukuba ufumane izaziso ezivela kuwe xa ukhupha imiqondiso yokuthengisa?
Ewe. Ngokufunda iiRhafu ezi-2 iakhawunti yeempawu zepremiyamu, ufumana isandi esikhawulezileyo, iselfowuni, kunye neimeyile ukuqinisekisa ukuba awusoze uphinde uphonononge urhwebo.
Ungaze uLuphose urhwebo kwakhona
Izaziso zomqondiso wexesha lokwenyani nanini na kuvulwa umqondiso, uyavalwa okanye uhlaziyiwe
Izilumkiso kwangoko kwi-imeyile yakho kunye nefowuni ephathekayo.
Amanqanaba amaxabiso okungena
Inqanaba lamaxabiso okungena kuyo yonke imiqondiso Khetha nje enye yeeNtengiso eziPhezulu kuluhlu olungentla ukuze ufumane konke oku simahla.
I-GBP / i-USB BUY
Qalisa ukufumana imiqondiso yasimahla ngoku!
Ndingathanda ukufumana uhlaziyo lwentengiso, unyuselo olukhethekileyo kunye neeleta zeendaba. Ndiyifundile, ndiyayiqonda kwaye ndiyamkele iMiqathango neMeko kunye noMgaqo-nkqubo wabucala.